Tag: hetsika fisoratana anarana | Martech Zone
Tag: fisoratana anarana
Rehefa mpandahateny ianao, ny iray amin'ireo fanamby lehibe atrehanao dia ny mamantatra hoe iza no nanatrika ny fotoam-pivorianao mba hahafahanao manara-maso aorian'izany. Ho an'ireo mpanatrika dia matetika no mahasosotra ny tsy ahafahanao manaraka ny fampisehoana eo an-toerana. Matetika ireo mpandahateny dia manolotra adiresy mailaka ahafahan'ny mpanatrika mandefa mailaka amin'izy ireo ary mangataka ny slide deck. Ny olana dia tara loatra io matetika. Miala ny mpanatrika, manadino ny adiresy mailaka ary tsy afaka mifandray ianao